CATINO Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ - Imewe Mmewe
Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ
Fraịdee 14 Jenụwarị 2022
Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ A na-amụ CATINO site n'ọchịchọ inye echiche maka echiche. Nchịkọta a na-anụrụ uri nke ndụ ụbọchị niile site na ihe ndị dị mfe, nke na-akọwughari ụzọ dị iche iche nke echiche anyị n'ụzọ oge. Ọ na-atụ aro ịlaghachi na gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ ma sie ike, site n'iji osisi ndị sitere n'okike, rụọ ya site na siri ike ma gbakọta iji nọgide ruo mgbe ebighị ebi.
Aha oru ngo : CATINO, Aha ndị na-emepụta ya : Emanuele Pangrazi, Aha onye ahịa : Disegno Ceramica.
Wenezdee 12 Jenụwarị 2022
Ime ụlọ ịsa ahụ na ụlọ ịsa ọcha
Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ Emanuele Pangrazi CATINO